Geeska wiyisha oo sida dahabka loo dhoofiyo - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, WILDLIFE JUSTICE COMMISSION
Geeska wiyisha ayaa waxaa la bilaabay in laga sameeyo agabka dumarka xirtaan si qarsoodi loogu dhoofiyo
Koox maafiyo ah oo si sharci daro ah uga ganacsata geeska wiyisha ayaa lasoo baxday xirfad cusub oo la layaab leh oo ay ku dhoofiyaan geeska, iyada oo ciidamada ammaanka iyo saraakiisha garoomada diyaaradaha aysan uga warhelin.
Shabakad lagula socdo dhaqdhaqaaqa ka ganacsiga sharci darada ah ee xayawaanka ayaa baaritaan ay samaysay waxa ay ku ogaatay in kooxdan maafiyada ah ay geeska wiyisha ka sameeyaan faraantiyo, kuul, dhego dhego iyo waxyaabaha kale ee ay dumarka xirtaan sida jijimaha oo kale.
Tan waxa ay ka caawinaysaa in aanan la ogaanin marka ay garoomada ka dhoofiyaan in uu waxani uu yahay gees wiyil.
Qiyaasyii 7,100 oo wiyil ah ayaa lagu dilay qaaradda Afrika laga soo bilaabo sanadkii 2007-dii sida lagu sheegay warbixinta, waxaana geeska wiyisha loo dhoofiyaa dalalka Aasiya oo dawo ahaan looga isticmaalo.
Qiyaasaha waxa ay sheegayaan in 25,000 kaliya oo wiyil ah ay Afrika ku hareen, kuwaas oo dabar go' qarka u saaran haddii aanan laga hortagin.
Dadaalada loogu jiro in looga hortago ugaarsiga iyo ka ganacsiga xayawaanka ayaa waxaa ragaadinaya kooxaha maafiyada ah oo markasta la imaanaya xirfad cusub oo ay ku ilduufaan ciidamada ammaanka.
Mid ka mid ah xirfadaha ay ku dhoofiyaan ayaa waxaa ka mid ah in xitaa ay ka dhigaan daqiiq oo ay shiidaan geeska.
Julian Rademeyer oo BBC-da la hadlay ayaa yiri "Waa arin walwal leh, haddii qof uu garoonka ka dhoofayo oo uu xiranyahay kuul ka samaysan gees wiyil sidee lagu istaajin karaa ama lagu aqoonsan karaa, booliiska waxa ay raadinayaan waa gees ama wax u eg".
Waxa la sheegay in ay hoos u dhacday isticmaalkii arrimaha dawada ee geeska wiyisha, balse dalka Vietnam oo kale dadka tujaarta ah ayaa waxa ay astaan sharafeed qofka u tahay in uu guriga dhigto gees wiyil.
Hay'adda lagu magacaabo Save The Rhino ee wiyisha lagu daryeelo ayaa waxa ay sheegtay in noolahan uu cirib tirmi doono 10-ka sano ee soo socota haddii ugaarsiga uu ku socdo xawligan. Hay'adda waxa ay intaas ku dartay in in ka badan kun illaalida xayawaanka ah la dilay intii ay shaqada ku jireen.
TOOS Xasan Sheekh oo villada galaya , Farmaajo oo ka baxaya
Waa kuma ninka muhiimka u ahaa Iiraan ee lagu dilay Tehran?
Xanuunka furuqa daanyeerka oo noqday ‘waalaca ugu weyn’ ee haatan dunida ka taagan
22 Maajo 2022
Maxaad ka ogtahay cuntooyinka la isticmaali doono marka la gaaro sanadka 2050?